မ နဲ့ ကျွန်တော်သည်.. ဆယ်တန်းအတူတူ မ တို့ အိမ်မှာ ၀ိုင်းကျူရှင်တက်ရင်း နေခဲ့ရင်းမှ ဆုံခဲ့ဘူးပါသည်.. မ သည် ရိုးရိုးယဉ်ယဉ် နှင့် ချစ်စရာကောင်းသလို ကျွန်တော်သည် မိန်းမနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် ဘာကိုမှ မသိသေးသော ငစနူလေး အချိန် ဖြစ်ပါသည်.. နောင်သောအခါ မ က ပြောသည်ကား ကျွန်တော်သည်.. တစ်ယောက်တည်း တွေးတော ငိုင်မှိုင်နေသည်ကို သဘောကြစွာ အေးအေးနေတတ်သူဟု အမှတ်တွေပေးကာ ချစ်လာခဲ့သည် ပြောပါသည်.. တကယ်လို့သာ ကျွန်တော်သည် သူ တွေးထင်သလို တစ်ယောက်ထိုင် မငိုင်ပဲ အဖော်အပေါင်းတွေနဲ့ မိုက်မဲလှစွာ ကဲခဲ့လျှင် .. မိန်းခလေးတို့ သဘာဝသည် စပ်စုတတ်သည့် မွေးရာပါ ဗီဇ၀ါသနာ လျှော်စွာ ကျွန်တော့်ကို ချစ်နိုင်မည်ဟု မထင်ပါ..။
မ နှင့် ကျွန်တော်သည်.. ထိုစဉ်က ၁၀ တန်းကို စာအတူတူ ၀ိုင်းကျူရှင်တွင် အိမ်မှာ ကျက်ရင်း အဖော်တွေက ညဉ့်နက်ထိ အိပ်ရေးပျက်ခံ မကြိုး
စားလေသော နွေ အကြိုညတို့တွင် ဆောင်းတွင်း မကုန်ခင်မို့ ခုံ တစ်ခုတွင် မျက်နှာချင်းဆိုင် အတူထိုင်လျှက် ခြေထောက်ချင်းမှာ ထိကပ်ကာ
စောင်ပတ်လျှက် မီးဖိုလှုံကာ စာကို ကျက်ဘူးခဲ့ပါသည်… ထိုအချိန်တွင် ကျွန်တော်တို့သည် စာကိုမှ တစ်ပါး အခြား ဘာစိတ်ကိုမျှ မတွေးထားမိ
တစ်ခုသော ညတစ်ညတွင် မ နှင့် ကျွန်တော် တူတူ ထိုသို့ စာကျက်ခဲ့စဉ် မှတ်မိသည်ကား သန်းခေါင်ယံကျော်အချိန်တွင် ဖြစ်ပါလိမ့်မည်.. မနီး
မဝေးတွင် အိပ်ပျော်နေသော ညအိပ်ကျောင်းနေ သူငယ်ချင်း ၂ ယောက်သည်ကား နတ်ပြည်တက်ချိန် မ နှင့် ကျွန်တော် စာကျက်နေချိန် မီး သည်ကား အလိုက်သိစွာ ပျက်ခဲ့ပါ၏ ။
ကျွန်တော်သည်လည်း ရုတ်တရက်မို့ မီးခြစ်ကို ထ ရှာ၊ မ သည်လည်း ထပြီး ရှာသော အခါ ခေါင်းချင်းဆောင့်ပြီး
အားးး.. ဟု အော်ကာ နာရင်း .. ၊ နာ သွားသလား မီးချစ်ကလည်း မတွေ့ဘူး နှင့် ချာလပတ်လည်ရင်း.. ဆောင်းညမှာ ချမ်းနေခိုက်
မီးချစ်ရှာရင်း သူမပါးကို နမ်းမိ ခဲ့ပါသည်.. အမှတ်မထင်ပါ.. တကယ်ကို အမှတ်မထင်ပါ.. မ ဆီက အသံ တစ်ခုမျှ မကြားခဲ့ပဲ ကျွန်တော်တို့
မီးခြစ်လဲ ရှာမတွေ့ပဲ ၅ မိနစ်စာ မပြည့်တဲ့ ထိုခနမှာ ပြာသိုလ်လက ပြည့်နေပြီး မန်ကျီးပင်ကြီး ဆီကနေ တစ်ဆင့် ဖြာကျလာတဲ့ အိမ်ရှေ့
အောက်မှာ သူမကို ဖက်တွယ်ရင်း ဘာမှ လဲ မပြောဖြစ်ပဲ ထိုင်နေမိခဲ့တယ်ဗျာ..။
မီး ပြန်လာတော့ အသာထလို့ သူမ စာမကျက်တော့ဘဲ သူ့အိပ်ခန်းကို ပြန်တက်သွားလေတယ်.. ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲ ငိုင် ကျန်ရစ်ခဲ့တယ် .ငါမှားပြီလား… အိမ်ရှင် အိမ်မှာ အိမ်ရှင်သမီးကို ခုလိုဖြစ်တာ မနက်ကြ ဘာဖြစ်မှာလဲ နဲ့ပေါ့.
အချစ်ဆိုသည်မှာ စိတ်ကူးတွေးတောယုံနှင့် မလုံလောက်စွာ မျှော်လင့်တောင့်တသော်လည်း ပေါ်မလာလေဘဲ တစ်ခါ တစ်ခါ ဘာမှကို မဆိုင်စွာ
မနက်မိုးလင်းလို့ ပုံမှန်ဖြတ်သန်းနေရင်းနဲ့မှ .. နွေနေ့လည်ခင်း အိမ်ဝန်းအတွင်း အပင်ကြီးအောက် ကျွန်တော်သည် စာကျက်မရစွာ ပက်လက်
ကုလားထိုင် ထိုင်နေရင်း မ သည် အနားသို့ လာထိုင်ပါလေသည်..။ (မှတ်မိသည်ကား သူမသည် ရေချိုးပြီးစ ခေါင်းလျှော်ပြီးစဆံနွယ်တို့သည်
လေမှာမျောကာ ရနံ့သင်းဆွ ဖြစ်နေပါသည်)
အဲလို မကျက်နဲ့လေ.. လာ .. မ ကူ ဆိုပေးမယ်
မက ရှေ့က ဆိုလိုက် ကျွန်တော်က နောက်ကလိုက်အော်ဆိုလိုက်.. ထိုစာပိုဒ်ရသွားလား မရသွားလားက မသိပေမဲ့ မ ဆံနွယ်ဖျားတွေက
တော့ ကျွန်တော့်နှာခေါင်း နှာသီးဖျားမှာ ခဏ ခဏ လာ လာ တိုက်ခတ်လေတော့
မ ဆံပင်တွေက နှာခေါင်းလာပွတ်လို့ဗျ
ရီလေသည်.. တအားကို မသည် ရီပါသည်..။
ကျွန်တော်က မ ပါးကို နမ်းဘူးတယ်လေ..
အာ … မ ကလဲ ကျွန်တော် ပျော်နေတာဗျ
မဟုတ်ဘူးလေဗျာ.. အဲလို နမ်းဘူးတော့ ချစ်သူ ဖြစ်ပြီ မလားလို့ .. မ ကိုကြည့်တော့ အေး စက်စက်ကြီး
မင်း… က မ ကို ချစ်သလားး
ချစ်တာပေါ့.. အရင်ထဲက အဲလို ပုံလေး ချစ်လာတာ … နမ်းဘူးတော့ ပို.. ချစ်
မပိုပါဘူးဗျာ ဒီမနက် ကျောင်းတက်တာတောင် မ စီပဲ စိတ်ရောက်နေတာ .. ညက အရမ်းရင်တုန်တာပဲ.. ချစ်သူုဖြစ်ပြီလား မ .. ကျွန်တော်တို့လေ
မ သည် စိုက်ကြည့်လေ၏ ။ ရွန်းလဲ့သော ၊ ကြည်လင်သော ၊ ပြုံးနေသော မျက်ဝန်းတို့နဲ့
မင်းမင်း က မ ကို ချစ်တယ်ပေါ့…
ချစ်တာပေါ့.. အရမ်း…. ချစ်
မ .. ကလဲ မင်းမင်းကို ချစ်ပါတယ်ကွာ..
လောကကြီးသည် နွေအကြိုရက်တို့တွင် တော်တော်ကြီးကို လှနေပါတော့သည်.. ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်သည် နွေအကြို ရက်တို့ကို
၀င်လေတိုင်း ပျော်မြူးနေတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်….။
နွေအကြိုညတို့တွင် မနှင့်ကျွန်တော်သည် ချစ်သူဖြစ်ခဲ့လေပြီ.. မြောက်ပြန်လေမှ တိုက်ခိုက်လာသော နွေထနောင်းပင်ရိပ်အောက်ဝယ် စာကျက်ပြီးသော ညတို့တွင် တူတူ ချစ်ကြောင်းကို ချစ်မ၀နိုင်လို့ ချစ်လှစွာ မ ကို ဖက်တွယ်ထားရင်း မ ပါးပြင် နှင့် မ နှုတ်ခမ်း မ နဖူးနဲ့ မ နှာတံ ၊ မ ဆံနွယ်နဲ့ မ ကျောပြင်တို့ကို သိခွင့်တစ်ချို့ ရခဲ့လေပြီ.. ချစ်လှပါသည်.. အချစ်ဦးမို့ ရူးမတတ်ဆိုသည်မှာ.. ထက်.. နေ့ တို့နဲ့ ညတို့ကို ဖြတ်သန်းရတာအရမ်းကို ရင်ခုံရလေသောကြောင့်… ထိုနှစ် စာမေးပွဲ လုံးလုံးကျခဲ့သည်ကား အဖြေပါတည်း..။ (ကဗျာ ဆန်ချင်နေတာဗျာ.. အဖြစ်မှန်က အဲလိုဆိုတော့ ရေးရင်း ရီချင်လာလို့.. ကိုယ့်အဖြစ်ကို ..)
ဆောင်းလေကုန်လို့ နွေလေညှင်းက ထနောင်းပင်ရင်းထိုင်နေသော ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ကြား တိုးဝှေ့လာသည်.. မနီးမဝေးဆီက မြို့လယ်
နာရီစင်က အချက်ပေးသံ ကြားရသည် ..။ ၁၂နာရီထိုးလေပြီ.. နမ်းခဲ့ရသော နဖူုး ၊ နှာတံ ၊ ပါး ၊ နှုတ်ခမ်း တို့လဲ မ အတွက် နွမ်းလောက်ပြီ ထင်ပါသည်.. ဖက်တွယ်ထားသော လက်တို့သည်လည်း မ ကျောပေါ်က ပြေစပြုပြီ။
မောင် ရေ… အိပ်ရအောင်နော်.. မနက်ကြ ဆွမ်းထ ချက်ရမှာ..
ဟုတ်.. မ .. ပျော်တယ်ဗျ.. ထက မထချင်သေးဘူး..
တော်ကြာ ဟိုကောင်တွေ နိုးလာရင် သိကုန်မယ် .. မောင်ရဲ့.. တကယ်လို့ မောင် ထနိုင်ရင် မနက် မ ဆွမ်းချက်တဲ့ အချိန် မီးဖိုချောင် လာခဲ့လေ
ဟုတ်.. အဲဆို .. မောင် မနက်လာခဲ့မယ်လေ နော်
သူမလည်း သူ့နေရာပြန် ကျွန်တော်လည်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တူတူ စောင်ခြုံ ကွေး အိပ်ခဲ့သည်ပေါ့.. မနက် အာရုဏ် မ နဲ့ ဆုံမယ်ဆိုပြီး ပျော်ပြီး
ရင်ဘတ်ကြီးတစ်ခုလုံး တစ်ခုခုက ဖိထားခံရသလို လေးနေသည်.. နှာခေါင်းတို့က ယား ယားနေသည်.. နှုတ်ခမ်းတို့က နွေးတစ်လှည့် အေး
တစ်လှည့်ဖြစ်နေသည်.. နှာခေါင်းကို ညှစ်ထားသလို ခံစားရပြီး အသက်ရှူမ၀သလို ဖြစ်လာသလိုလို နှင့် အိပ်ပျော်နေသော ကျွန်တော် လန့်နိုးလာတော့……..
ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ပေါ် ရင်ချင်းအပ်ဖိပြီး ကျွန်တော့်ကို ပြုံးကြည့်နေသော မ ကို တွေ့လေသည်..
ရှူးးးးးးးးးး ဟိုကောင်တွေ နိုးကုန်မယ်..မ က မင်း မနိုးလို့၊ နမ်းတာလဲ မနိုးလို့ နှာခေါင်းဆွဲလိမ်ပစ်တာ .. ထ.. လေ..
ဟီး.. ဟုတ် .. မ
မီးဖိုဆောင်ကို လာခဲ့သည်.. တပို့တွဲ လပြည့်ကျော်ပေမဲ့ မနက် ၄ နာရီကျော်မှာ လ အရောင်သည် မ ကို ကောင်းစွာ မြင်နေရလေသည်.. တစ်ခု
သတိထားမိသည်.. ည က လို မ ကိုယ်သင်းနံ့ မရပဲ စံပယ်ရေမွှေးနံ့လေး မ ဘေးနားက ဖြတ်လာစဉ် ရမိလေသည်..။
မီးဖိုဆောင် မရောက်မှီ မန်ကျီးပင်ကြီးအနားတွင် ကျွန်တော် မ ကို ဆွဲဖက် ပွေ့ရင်း အရမ်းကို ဖက်ကာ မ ပါးကို အနမ်းတွေ ရွာလို့ မ နုတ်ခမ်းဖူးဆီ
သို့ အကြာကြီးကို .. ငုံ စုပ် ထားမိပါသည်..
မောင်.. အပြင်ကြီးမှာ.. လေ
ဘယ်လိုလဲတော့ မသိ .. လပြာပြာ နဲ့ မန်ကျီးပင်ရိပ်ကြီးက ကျွန်တော့်ကို ဆွဲဆောင်နေသည်လား… မ ကိုယ်က ၀တ်ထားသည်က ပိတ်ပါးစကြောင့်
လေလား .. အရမ်းနွေးထွေး အရမ်း ရင်တုံ.. အရမ်းကို ဖက်လို့ မ ကို အရမ်းကြိးကို နမ်းရင်း .. နမ်းရင်း.. မ ပြောတာ ကို မကြားတော့ပါ..
မဆုံဘူးသည့် မမြင်ဘူးသည့်  မကြုံဘူးသေးသည့် မ ရင်ခွင်က ရင်သီးကြားကို ပိတ်ပါးစ အပြင်က နေ ကိုက်မိလိုက်ပါသည်…
အာ.. နာတယ်… မောင်.. မောင်… လို့
သိတော့ပါ.. ဆွဲ မ လှန်ပစ်မိသည်.. အောက်က နောက်တစ်ထပ်က ခံနေပြန်သေးသည်.. ရှုပ်သည် .. မမှီ မှိတာ ဆွဲလှန်မ ကာ ကုန်းစို့တော့
ခစ် ခစ် ခစ် နောက်ကျော မဖြုတ်ရသေးဘူး .. မောင်ရ.. နေအုန်း
မ က ဖြုတ်ပေးသည်.. ည အမှောင်မှာ သူမ နို့ စူသလား ချွန်သလား လုံးသလား နီသလား ညိုသလား မဲသလား ဘာ.. ဘာကိုမှ ကျွန်တော်
မသိပါ.. သိနေသည်ကား နို့ လေး အိအိ .. အသီးလေး စုစု တို့ကို တစ်ဘက်ပြီး တစ်ဘက် စို့သည်…. ပျော်ခြင်း ( မိန်းခလေး နို့ ဦးစွာ စို့ဘူး
လို့ .. သာယာခြင်း .. အထိ အတွေ့ နွေးထွေး အိစက်လို့.. တက်မက်ခြင်း.. ထို အထိ အတွေ့မှ တိုးတက်လာခြင်သော စိတ် အဟုန်တို့ပြင်းလာ
ုခြင်း) တို့နှင့် မန်ကျီးပင်ရိပ်အောက် မီးဖိုချောင်သို့ မရောက်မှီတွင် မသည် အပေါ်ပိုင်း ဟာလာဟင်းလင်း နှင့် သူမ ရင်ခွင်ကြား ကျွန်တော်
မန်ကျီးပင်ကြီးသည် ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ကို ကောင်းစွာအမှောင်ချထားလေ၏ ။ သစ်ရွက်တို့ဆီမှ လှုပ်ခပ်လာသော ယိမ်းနွဲ့သံတို့သည် စည်းချက်ညီစွာ မနက်အာရုဏ်မှာ မရင်ခွင်ကြားခိုနားနေသော ကျွန်တော့်အတွက် ရင်သီးကြားတို့ဆီက ချိုမြိန်လှသည့် နူးညံ့မှုတို့ကို ထပ်ပြီး ကူပေးနေသယောင်ယောင်.. အမှောင်ကို ကွယ်ကာ ပင်အိုရိပ်ဆီမှ မ ခါးကို အလိုလို ဆွဲကိုင်ဖက်ရင်း ထမီကြားဆီ အလိုလို လက်က ရောက်သွားလေခဲ့ပါလေသည်…။
မ ထမီအောက် ဘာမှ မရှိလေပါ.. သိလေသောအခါ ရင်သည် ဒုန်းခနဲ နဲ့ ရုတ်တရက် အဖုတ်ထက်က အမွှေးတို့ကို စမ်းမိလေသော အခါ မ နုတ်ခမ်းကို အငမ်းမရ နို့သီးထက်ကို စုပ်နေရာမှ
ပြောင်း ပြေးကာ စုပ်မိလေတော့သည်… ကျွန်တော်သိပါသည်.. ကျွန်တော့် ဘောင်းဘီအောက် က ဘာဖြစ်နေပြီ ဆိုတာ .. ရင်ချင်းအပ်လို့ ခါးချင်းထပ်ကာ ပြေးကပ်လိုက်တော့ ကျွန်
တော့် ဘောင်းဘီအောက်က ဖုဖောင်းနေတာသည် မ ရဲ့ ထမီအောက်က ဖုဖောင်းနေသော နေရာဆီသို့ တညီတည်း ပြေးကပ်ထိလေသည်..။
လက်သွယ်သိုင်းကာ ယှက်နွယ်ဝိုင်းသည့်  လက်မောင်းသွယ်နှစ်ဘက် မဆီမှ တက်လာပြီး ကျွန်တော့်ကို သိုင်းဖက်ကာ မ လည်း အရမ်းကို နမ်းနေလေသည်.. ကျွန်တော်လည်း အရမ်းကို
နမ်းနေလေသည်.. အောက်ပိုင်းဆီက ဆန့်ကျင်ဘက် နှစ်ခုတို့သည်လည်း သဘာဝအားလျှော်စွာ မိတ်ဆက်ကျလေပြီ .. နေမရတော့ပါ .. ထမီစကို ဆွဲချွတ် ချလိုက်မိလေသည်..
ဘောင်းဘီကို ချွတ်တော့ ခါးပတ်က မကျွတ်တာ ဒေါသ ထွက်မိလေသည်.. အပေါ်ဘက်ဆီက အနမ်းတို့ကို အစဉ်မပြတ် ဆက်လက် ချီတက်ရင်း သူမလိုပင် အောက်ဗလာပြင်နှင့် လိုက်
ဘက်ညီအောင် အမြန်လုပ်ဆောင်ရပါသည်…ကျွတ်ပြီ .. လွတ်ပြီ အသိနှင့် ပြေးကပ်မိတော့ ကျွန်တော့် ဟာသည် သူမပေါင်ကြား ပြေးခွဲဝင်သွားလေသည်.. နွေးလိုက်သည် ဖြစ်ခြင်း.. ဘာ
ကိုမှ မသိသေးသောဘ၀မှာ လုပ်မိသမျှက ရင်တုန်လှိုက်မော လှိုင်းတွေကြောမှာ မျှောနေသည်.. တစ်ခါမှ မရောက်ဘူးသော နယ်ပယ်တစ်ခုဆီ စိတ်အာရုံမှာ လွင့်မျှောလို့နေခဲ့ပြီ..
ပေါင်ကြားခွဲထဲ ရောက်နေလေသော ကျွန်တော့် အတံသည် တောင့်မတ်ဖြောင့်တန်းနေရင်းမှ တိုးဝင်ချင်သော နေရာတစ်ခုဆီ အလိုလို သိလာသောအခါ အတည့်ရပ်နေရာမှ ကော့လှန်ထိုး
မိခဲ့သောအခါ ၀င်သွားသလား မ၀င်သွားသလား မသိပေမဲ့ ထိပ်ဖျားသည် အတွင်းနေရာ တစ်ခုမှာ နွေးထွေးသော သူမဆီမှ ကြိုဆိုမှုနှင့် ပူနွေးလျှက် ရှိသည်ကို ခံစားမိချိန်……….
အာမေဋိတ်သံ သဲ့သဲ့ သူမ နှုတ်ခမ်းဖျားဆီက ထွက်ကျလာလေသည်.. တိုးဝင်သွားသော နေရာသည် အဆုံးစွန်ထိ ပြေးကပ်ထိမိလေသောအခါ
နှစ်ဦးသားကိုယ်ခန္ဓာတို့သည် တဆတ်ဆတ် တုန်ရင်နေခဲ့ပြီးဘာကို ဖက်တွယ်ရမှန်းမသိ ယောင်တိယောင်ဝါး မှီရာ လှမ်းကိုင်ဆုပ်နယ်ပွတ်သပ်ကြ
ရင်း အတင်းအကြပ် ဖက်တွယ်နမ်းရှိုက်မှုတို့နဲ့အတူ အောက်ပိုင်းဆီက သူမဖုတ်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းဆီမှ တစက်စက် စီးကျလာသော အရည်တို့
သည် ကျွန်တော်ဆောင့်သမျှ ရွှဲရွှဲကျလာကာ စီးစီးပိုင်ပိုင်နှင့် ၀င်ထွက်မှုတို့မှာ အာရုဏ်မှာ လေဟုန်စီးရသကဲ့သို့ အိမ်မက်ပမာ ပထမဦးဆုံး
သော လုပ်ရခြင်းမို့ ကျွန်တော် ကြာကြာ တောင့်မခံနိုင်ပါ…
သတိတစ်ချက်ရှိသည်အလား.. အရင်ကတည်းက ကိုယ့်ဘာသာ ဖြေခြင်းများကြောင့် အကျင့်ရှိသည်လား မပြောတတ်.. ပန်းထွက်ခါနီး ကျွန်
တော့် အတံ ကို သူမ အထဲမှ ဆွဲထုတ်ကာ အားပါးတရ ပန်းထုတ်လိုက်မိပါသည်.. ဝေါ ခနဲပဲ .. အများကြီးပဲ.. သူမ ဗိုက်ဆီ ပန်းထွက်မိပါလေ
သည်..မ က ရီလေသည်.. နဖူးကိုလဲ ခေါက်သည်…
ဘာ လို့ အထဲ မထည့်တာလဲ
ဟို.. ဗိုက်ကြီးမှာ ကြောက်လို့…
ပါးကို ရွှတ်ခနဲ လာနမ်းသည်..
ကျေးဇူး မောင်… လာ.. ဆွမ်းချက်တာ ကူလုပ်ပေး
ထို မနက် အာရုဏ်တက်တွင် ကျွန်တော် အပျော်ဆုံး လူသား ဖြစ်နေသည်မှာ သူငယ်ချင်းများက ဘာဖြစ်နေတာတုန်းဟ ၊ စပ်ဖြီးဖြီးနဲ့ မင်းက
ဟု ပြောရအောက်အောင်ပင်.. တကယ်တော့ ဒင်းတို့သည်.. လူမဖြစ်သေးပဲ ကျွန်တော်သည် လူဖြစ်သွားသည့် ပထမဦးဆုံး အရသာ သိတဲ့
အကြောင်းမဆုံသော အကြောင်းတို့ဖြင့် မ နဲ့ ထိုခဏမျှသာ ဆုံခဲ့ပြီး ထို တစ်ညသာ ပထမဦးဆုံး လူပျိုည စွန့်လွှတ်ခဲ့ရပါလေသည်..
ထို လွမ်းမောဘွယ်ရာသည်.. အချစ်ဦးလဲဖြစ် သုတ်ရည်ဦးလဲ ဖြစ်ခဲ့ပြီးကာမှ လွဲခဲ့ရပြီလို့ မှတ်ယူကြပါလေကုန်…
မလေး နဲ့က အေးသောအရပ်ရဲ့ တောင်ပေါ်မြို့လေး တစ်မြို့မှာ ချစ်ခဲ့ကြတာပါ.. ချစ်ခဲ့ကြတဲ့ ကာလကလဲ အေးသော ဒီဇင်ဘာ ဖြစ်လေပြီး နေ့မှာတွေ့လဲ အနွေးထည်နဲ့ ညမှချိန်းလဲ မာဖလာနဲ့ ကိုရီးယားကားလို လက်ကလေးကိုင် ခုံတန်းလေး ထိုင်ရုံမျှနဲ့ မနွေးနိုင်ပါ.. ဖက်သည်.. အရမ်းကြီးကိုဖက်ပြီး .. နမ်းသည်.. မလေး နှုတ်ခမ်း ဖူးဖူးတွေဆို အချိန်တိုင်းလိုလို ကျွန်တော့်နှုတ်ခမ်းထဲမှာ ရောက်ရောက်နေလို့ ကြာတော့..
မောင်ရာ.. စကားကို မပြောရတော့ဘူး.. မောင်က နမ်းကြီးပဲ နေတာပဲ..
ပြောနဲ့တော့.. ပြောရင် .. ပိုချမ်းတယ်.. သိနေပြီးသားပဲဟာ.. လာ..
ထပ်နမ်းပြန်ပါသည်.. သို့ရာတွင် ထိုအနမ်းတို့သည် ထိုကဲ့သို့ အေးသော အရပ်မှာ သူမ မျက်နှာပေါ်မှာ ၀ဲပျံရုံကလွဲပြီး တစ်ဆင့် မတက်နိုင်ခဲ့ပါ..
ချစ်သူသက်တမ်း ၄ လ အကြာမှာ နွေကို ရောက်ပါလေသည်.. အရင်ထက်ပေါ့ပါးသော အ၀တ်အထည်တို့ဖြင့် ကျွန်တော်တို့ နှစ်ဦး ထင်းရှူးပင်
အောက် တစ်ခေါက် ချိန်းဆိုမိခဲ့ပါလေသည်.. အဝေးမှာသည်.. ဂေါက်ကွင်းဖြစ်ပါသည်…။ ခြောက်သွေ့နေသော ထင်းရှူးရွက်ကြွေတို့ရဲ့အောက်
ဆွီတီးဟုမ်းမွေ့ယာလို သဘောထားက ထိုတနေ့က မလေးပါး ကို နမ်းနေရင်းက မလေး ချိုကို စတင် စို့ ဘူးခဲ့ပါသည်.. ကျွန်တော် မှတ်မိသည်..
မလေး နို့လေးသည်.. လုံးသည် .. ကျစ်သည်.. ဖြူသည်.. တင်းသည်.. ထိပ်သီး သည်.. ညိုပါသည်.. စတင်စို့ခဲ့စဉ်က မြုပ်ကွယ်နေခဲ့သော..သူမ
နို့သီးခေါင်းလေးသည်.. ၁၅မိနစ်မကြာသော အတောအတွင်း ထင်းရှူးတောမှာ သူမ ညီးရှိုက်သံတို့နှင့်အတူ ထောင်တက်လာခဲ့ပါလေသည်..
ကျွန်တော်သည်လဲ ထောင်တက်လာခဲ့ပါသည်ပေါ့.. သို့ရာတွင် နှစ်ဦးသဘောတူထားသည်မှာ အတူနေမှ အောက်ပိုင်းရမည်ဟု ကတိစကား
ကြောင့် ခါးအောက် လက်ရွှေ့မရ.. မျက်နှာနှင့် နို့ စိတ်တိုင်းကျ နေခွင့်ရပြီး ဘောအောင့်ကာ အပြန်လမ်းမှာ ကွတ ကွတ ပြန်လာခဲ့ရသည်..
ဟို.. အောက်က .. အောင့်လို့..
မလေးလဲ .. တစ်မျိုးကြီးပဲ.. နေရတာ အောင့်တောင့်တောင့်နဲ့..
လာ.. ဗိုက်ဆာပီ.. ခေါက်ဆွဲကြော်စားရအောင်..
ခေါက်ဆွဲကြော်ဆိုင် ၀င်ထိုင်စားရင်း ၂ ပန်းကန်ကို သူမက စေတနာပို ကျွန်တော့်ပန်းကန်ကို သူမပန်းကန်ထဲမှ တစ်ဝက်ခွဲထည့်ပြန်လေတော့
အတူတူ စားရမှာကို .. အတူတူမှာထားတာ.. မစားချင်သွန်ပစ်လိုက်.. လာမထည့်နဲ့.. ဟု အော်ခဲ့မိသော ကျွန်တော့်
အော်မိတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကြောင့် ခေါက်ဆွဲစားရင်း မျက်ရည်ကျခဲ့သော မလေးကို လွမ်းဘာသည်..။
မလေးနဲ့ ကျွန်တော်သည် ထိုတောင်ပေါ်မြို့လေးရဲ့ လွမ်းမောဘွယ်ရာ နေရာအစုံစုံတို့မှာ ချစ်ကြည်နူးခြင်း အဖုံဖုံတို့ဖြင့် မရိုးနိုင်သော နမ်းခြင်း ၊ စုပ်ခြင်း၊ပွတ်သပ်ခြင်း၊ပွေ့ဖက်ခြင်း၊ကျီစယ်ခြင်း၊ရီမောခြင်း၊လည်ပတ်ခြင်းတို့ဖြင့် ကတ္တရာလမ်းခင်းတို့မှာလဲ အတူတူ ဖြတ်သန်းခဲ့လေဘူး ၊ ပန်းခြံ ပန်းခင်းထဲမှာလဲ နမ်းလို့မ၀လေဘူး၊ ထင်းရှူးပင်အောက် မြက်ခြောက်တို့ရဲ့ ဖဲမွေ့ယာပေါ်မှာလဲ sexy မကျတကျ ချစ်ခဲ့ကြလေဘူး နဲ့ ၅လတာ ကာလတို့ကို ဖြတ်သန်းခဲ့လေရင်း……
တစ်ဘ၀အတွက် တစ်ခဏတာ ခွဲရမဲ့ နေ့ရက်ကို ရောက်လာခဲ့ပါပီ.. မျက်ရည်တို့သည် ဖြေမဆည်ပါ.. ကျွန်တော်သည်လဲ ငိုခဲ့ပါသည်.. ကျွန်တော့်အချစ်သည် ထိုအချိန်အခါမှ အချစ်လို့ သိလာခဲ့သည့် အချိန်မို့ထင့်.. အသံ မထွက်… မျက်နှာမမဲ့ပဲ.. အံကြိတ်လျှက်သာ ရင်ဆိုင်ငိုကြွေးခဲ့ပါသည်..
မလေးကတော့.. မိန်းခလေးပီပီ .. ရှိုက်ကာ ရှိုက်ကာ ငိုခဲ့လေသည်..
ဆို့နစ်သံကို နွေရာသီ ဦး အလှဖူးမှာ ကြားရသောအခါ ကျွန်တော်နွေအလှကို မသိနိုင်တော့ပါ..။
မလေးတို့ .. ဒီညတော့ .. ဆုံဖြစ်မှာပါ.. မောင်.. အချိန်တန်ရင် အရောက်ပြန်လာခဲ့နော်.. မလေး မျှော်နေမယ် သိလား..
ဟုတ်.. မလေး.. မောင် .. မလေး ကို တစ်သက်လုံးချစ်သွားမှာပါ.. မလေး .. မျှော်နေပါ .. ကတိနော်
သူမ ဖက်ထားသည်.. ကျွန်တော်တို့ ချစ်ခဲ့သည့် သက်တမ်း ၅လကျော်အတွင်း ယခုလို သူမ အားပါးတရ ဖက်ထားသည်ကို တစ်ခါတစ်လေမျှ
မခံရဘူးလေသောကြောင့် ကျွန်တော် အသက်ရှူဘို့ပင် မေ့သွားခဲ့ပါလေသည်..။
မောင်.. ညကျရင် .. မလေးအိမ်ရှေ့ လာခဲ့တော့..
နှုတ်ဆက်ရင်းနဲ့ ခွဲခွာခဲ့ပြီး အပြန်လမ်းမှာ အထီးကျန်စွာ နွေရက်များသည်လည်း ခြောက်သွေ့စွာ လေပွေညှင်းတွေနဲ့ တောင်ပေါ် အရပ်မှာတောင်
နွေခေါင်ခေါင် ကန္တာရကို ဖြတ်လျှောက်ရသူကဲ့သို့ အပြန်လမ်းကို ဖြတ်သန်းရင်း မလေးနဲ့ ညမှာ ဆုံမဲ့ အခြေအနေတွေကို မေ့လျှော့စွာ အဆောင်
ကို ဘယ်လို ပြန်ရောက်လာခဲ့မိတော့မှန်း မသိပါ။
အဝေးဆီမှ.. နာရီစင်က ၉ နာရီထိုးသံ သဲ့သဲ့ ကြားလေသည်.. ဘုရားရင်ပြင်အောက်ခြေဆင်း တောင်စောင်းက အုတ်ခုံတန်းလျားဝယ် ထိုင်နေ
သော ကျွန်တော်တို့ နှစ်ဦး ဖက်တွယ်ရင်း ထိုင်နေရင်းက စဉ်းစားမိသည်ကို တစ်ပြိုင်ထဲ တူတူ ပြောမိကြသည်က
မောင်.. ဘုရားမှာ .. အတူတူ တက်တဲ့ ချစ်သူ စုံတွဲတွေ ဒီလို ထိုင်ပြီး ဟိုလို နမ်းရင် ကွဲတတ်ကြတယ်တဲ့
အင်း.. အဲလိုတော့ မသိပေမဲ့.. ဘုရားဝတက္ကမြေမှာ ဒီလို နေလို့တော့ မသင့်တော်ဘူး .. မောင်လဲ ကြောက်တယ်
အဲဆို ဘယ်သွားမလဲ.. မောင်
မောင်နဲ့လဲ မဝေး မလေးအိမ်နဲ့လဲ မဝေးတဲ့ မောင်တို့ရပ်ကွက်က ရေပြင်ကုန်းလေးက မြက်ခင်းမှာ ထိုင်ရအောင်..
သဘောတူစွာဖြင့် .. လိုရင်းတိုရှင်း ထိုနေရာသို့ ထိုင်ခဲ့ပြီး အပီအပြင် နမ်းခဲ့ .. စုပ်ခဲ့.. နှို့တွေနှိုက်.. ပွတ်ချေ.. နှုတ်ခမ်းတွေစုပ်.. တစ်ကိုယ်
လုံးကို ဖက်. ထူးခြားသည်က ဖင်သားတွေပါ ကိုင်လို့ ရ. အရှေ့တော့ ကျွန်တော်လဲ မကိုင်ရသေး.. နဲ့…
ဒေါင်.. ဒေါင်.. ဒေါင်..
၁၁ နာရီ ကျော်လာခဲ့လေပီ..
မနက်ကျ .. မောင်က မလေးနဲ့ အဝေးကြီး သွားရတော့မှာ.. မလေးက အိမ်ကနေ အလုပ်ကို ခွင့်ယူလာတာ ဆိုတော့ နေလို့ရသေးရင်
အင်း .. မောင့်သဘော.. မလေးက ပျော်ပြီးသားဘာ မောင်ရယ်..
ဒါဆို.. မလေးက .. မူနေတာပေါ့
စတာပါဗျာ.. အာ.. ၀ါးးး
လန့်သွားကြပါသည်.. ကြည်နူးတွေတာတွေ ဘယ်ရောက်ကုန်မှန်းကမသိ
မင်းတို့ ၂ ယောက် ဒီချိန်ထိ ဒီမှာ မထိုင်ကြနဲ့.. အန္တရယ်များတယ်.. ပြောမရဘူး.. ညီလေးတို့ ပြန်ကြတော့နော
လူတစ်ယောက်ပါ .. ဓါတ်မီးလေးနဲ့
ဟုတ်.. အစ်ကို.. ကျွန်တော်တို့က သမီးရီးစား မိကောင်းဖခင်သားသမီးတွေပါ… ဒါ .. ကျွန်တော့ချစ်သူပါ.. ကျွန်တော် မနက်ကြ သူနဲ့ အဝေး
ကြီး ခွဲရတော့မှာ .. အဲကြောင့်ပါ..ကိုယ်နားလည်ပါတယ်.. ကိုယ်လဲ ဒီနားကပါပဲ.. ဒီလိုလုပ်.. မင်းတို့ .. နေချင်သေးရင် .. ဟော ဟိုမှာ.. အစ်ကို့ဆိုင်.. အဲဒီမှာ သွားနေကြ
အစ်ကိုတို့ လင်မယားက အိမ်ပြန်ကျတော့မှာ.. မနက် ၅ နာရီမှ ပြန်လာမယ်.. သွား.. သွား အဲကိုသွား.. ဒီမှာ မနေကြနဲ့
ဘုမသိ ဘမသိနဲ့2 ယောက်သား လက်တွဲပြီး ထို ဆိုင်ထဲ ၀င်လာတော့.. ဆိုင်ရှင်အမက … ပြူးကြောင်ကြောင်ကြည့်.. အဲဒီအစ်ကိုက တိုးတိုး
ကပ်ပြောနဲ့.. အဆင်ပြေစွာပဲ… ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ကို သူတို့ အိပ်ယာထဲမှာ ထားခဲ့ပါလေသည်…
Posted by အမည်မသိစာအုပ် at 09:23